पुरुषहरु को लागी बैंग्स को प्रकार | स्टाइलिश पुरुष
पुरुषहरु को लागी बैंग्स को प्रकार
पुरुषहरु मा धमाका अझै पनी अवस्थित छ र यो विशेष र फरक स्पर्श संग धेरै मानिसहरु को लागी एक अपरिहार्य को केहि प्रकार को कवर वा एक स्पर्श दिन को लागी एक आवश्यक पूरक हो फराकिलो मोर्चामा सन्तुलन.
एक कपाल काट्ने र bangs पाउनुहोस् यो तपाइँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, किनकि यो तपाइँको अनुहार लम्बाउन सक्छ, तपाइँको सजिलो सुविधाहरु धेरै धेरै बन्द वा कुनै पनी विशेषता लुकाउन सक्छ। एक संदेह बिना, छोटो कपाल स्टाइल ती हुन् कि बैंग्स कि सबैभन्दा अपील दिन्छन्, उनीहरु त्यो दिन्छन् धेरै कूलर र कूलर हेर्नुहोस्।
1 Bangs को प्रकार अनुहार मा निर्भर गर्दछ
2 बैंग्स को प्रकार
2.1 लामो, कोणीय बैंग्स
2.2 कपाल धेरै संग सीधा bangs
2.3 छोटो tousled bangs
2.4 घुमाउरो धमाका
2.5 Bangs मर्मत
Bangs को प्रकार अनुहार मा निर्भर गर्दछ
हामी पहिलो हात जान्दछौं कि सबै कपाल काट्ने चापलुसी र अधिक छैन, एक शक बिना, यदि हामी हामीलाई bangs छोड्न जाँदैछौं। गोलो अनुहार सीधा bangs को आवश्यकता छैन, प्रभाव अझै पनी धेरै अधिक potentiated हुनेछ। आदर्श त्यो समरूपता तोड्नु हो यसलाई छेउमा चिन्ह लगाउँदै। Bangs लामो अनुहार संग पुरुषहरु को लागी उपयुक्त छ उनीहरुको लम्बाइ छोटो हुन्छ।
वर्ग अनुहार तिनीहरू सामान्यतया धेरै स्पष्ट जबडा छन्। त्यो जबडा को ध्यान को कल संग तोड्न को लागी, तपाइँ एक hipster केश मा शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ धेरै लामो कपाल माथि अनुहारमा धमिलो धमाका संग। बैंग्स यस प्रकारको अनुहारमा राम्रो लाग्दैन किनकि उनीहरु आफ्नो लम्बाइ छोटो पार्छन्।
कसरी tousled छोटो कपाल को शैली
अण्डाकार अनुहार को लागी हामी hairstyles र सौभाग्य को धेरै प्रकार को सल्लाह दिन सक्छौं bangs को सबै प्रकार को स्वीकार गर्दछ। एउटै दाढी को प्रकार संग हुन्छ, लगभग सबै मोडेलहरु लाई स्वीकार गरीन्छ।
बैंग्स को प्रकार
पुरुषहरु मा धमाकाहरु फिर्ता रहन को लागी छन्। तिनीहरूले 2016 मा आफ्नो प्रवृत्ति सेट र यो फेरि त्यो परिष्कृत पहलू को लागी एक छवि छ कि ताजगी र गतिशीलता प्रदान गर्न को लागी प्राप्त हुन्छ को लागी पुनः प्राप्त गरीन्छ। तिनीहरूको प्रकार वा वर्गहरु धेरै फरक छन्, बैंग्स संग धेरै लामो कपाल संयोजन गर्न को लागी तपाइँ यसलाई भोल्युम दिनु पर्छ। सेवा गर्नुहोस् कोण कटौती संग ढाल कटौती। यद्यपि चिकनी र सीधा कटौती, सबै कुरा कपाल काट्ने प्रकार संग जोडिएको छ जसमा यो संयुक्त छ।
एक आदर्श bangs प्राप्त गर्न को लागी आदर्श यो हो कि तपाइँ पहिले नै प्रकार तपाइँ चाहानुहुन्छ थाहा छ, प्रति फोटो प्रतिकृति पाउनुहोस् र थाहा छ कि यो एक हो कि तपाइँ अनुहार को आफ्नो प्रकार को लागी राम्रो संग सूट हुनेछ। कपाल कपाल जिम्मेवार हुनेछ कि कटौती तपाइँ चाहानुहुन्छ मिलान गर्न, यो तपाइँको कर्ल तपाइँको अनुहार मा थोरै खस्ने बनाउनेछ। यदि तपाइँ सीधा कपाल छ, यो कोण हुनेछ, यो कहाँ हुन सक्छ? सीधा वा छेउमा बगेर। यो एक पेशेवर को हात मा हुन को लागी आवश्यक छ कि उसलाई थाहा छ कसरी अनुहार को पक्ष संग बैंग्स को पक्षहरु मिश्रण गर्न को लागी।
लामो, कोणीय बैंग्स
यो लामो छ र सम्पूर्ण निधारमा पुग्छ र भौहें को भाग। यसको आकार सीधा वा एक कटौती संगै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ अनुहार को एक छेउमा। यो कटौती को लागी पनि डिजाइन गरीएको छ जब तपाइँ तपाइँको कपाल पछाडि तान्न चाहानुहुन्छ र यो निस्सन्देह सबैभन्दा लोकप्रिय र साहसी केटाहरु को लागी एक हो।
कपाल धेरै संग सीधा bangs
यस प्रकारको कटौती हुनु पर्छ एक धेरै तंग र सही कटौती। एक विशेषज्ञ को हातले तपाइँ यो फ्रिंज प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। धेरै जसो अवस्थामा, कपाल को एक धेरै यो बनावट र दृढता दिन को लागी आवश्यक छ। कपाल को लम्बाई या त धेरै लामो वा छोटो छनौट गर्न सकिन्छ।
छोटो tousled bangs
बैंग्स को यस प्रकार छोटो छ र तपाइँ यसको छोटो लम्बाइ को कारण यो लगाउन को लागी हिम्मत गर्दछ। तिनीहरू ट्रेन्डसेटर हुन्, दुबै घुमाउरो कपाल र मा गन्दा र चिल्लो कपाल मा। यसको उद्देश्य यो हो कि यो बिल्कुल भhe्ग गरीएको छ, तर हेरचाह को केहि स्पर्श संग, यो लाग्छ कि यो हो व्यवस्थित र प्राकृतिक रूप मा आकार।
घुमाउरो कपाल भएका पुरुषहरुको लागी यो प्रकारको कट हराउन सक्दैन। यो पक्ष सामान्यतया छोडिएको छ अन्डरकट र आधुनिक कटौती, टाउको को पक्षहरु धेरै मुंडा छन् र माथिल्लो क्षेत्र धेरै लामो छ। सबै कपाल अगाडि फ्लप हुनेछ, एक प्राकृतिक पतन संग माथी मा, धेरै वा केहि कर्ल संग। आदर्श रूप मा, एक नजर छोड्नुहोस् कि आन्दोलन सिर्जना गर्दछ।
जब हामी हाम्रो कट तयार छ हामी जान्दछौं कि कसरी यो संग देखाउन को लागी ताजा र युवा उपस्थिति। यदि तपाइँ एक फिक्सेटिभ को उपयोग गर्न को लागी यो गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका संग गर्न चाहानुहुन्छ एक म्याट प्रभाव संग एक उत्पादन। कपाल मोम लाभहरु मध्ये एक हो, किनकि यो एक ब्रान्ड हो र तपाइँ एक सानो गीला प्रभाव छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्र संग एकै स्तर मा राख्न को लागी रहन्छ एक महिना एक पटक सानो कटौती, किनकि यस क्षेत्रमा यसको बृद्धि चिन्ह लगाइएको छ।
जब एक कपाल छनौट र विशेष गरी bangs संग, तपाइँले गर्नु पर्छ कपाल को प्राकृतिक आकार सम्मान। कपाल जबरजस्ती नगर्नुहोस् वा तपाइँको हेयरड्रेसर लाई आकार बनाउन दिनुहोस् जुन तपाइँ पछि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न जब तपाइँ तपाइँको पहिलो धुनु हुन्छ। यदि तपाइँ अधिक विचारहरु जान्न चाहानुहुन्छ तपाइँ हामीलाई हाम्रो सेक्सन मा पढ्न सक्नुहुन्छ "बैंग्स संग कपाल काट्ने"।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » पुरुषहरु को लागी बैंग्स को प्रकार
अय्या मलाई मन पर्छ कि पुरुषहरूले दिनहुँ नयाँ लुकहरू प्रयोग गर्दै सुपर क्यूट देखिन्छन् र उनीहरूले यो गर्नका लागि आफूहरू कम पुरुष छन् भन्ने महसुस गर्दैनन्, मेरो प्रेमीलाई केश शैली, फरक लुक गर्न मनपर्छ र म भन्दा फलामको प्रेमी हो र होइन। , हैन ऊ समलैंगिक हो, त्यसो भए के हुन्थ्यो ? हाहा, तथ्य यो हो कि यहाँ मैले तपाइँलाई सिधा गर्ने ब्रश सिफारिस गरेको रूपमा छोडेको छु जसले उसलाई नयाँ लुक पाउन धेरै मद्दत गरेको छ, किनकि उसले यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ भन्छ।
Estefanía लाई जवाफ दिनुहोस्
Waxing पछि दाना कसरी हटाउने
कसरी एक महिला लाई बहकाउने